Marka usbuucyadu socdaan, midwalba Waqti yar ayaa ka haray munaasibadda loo malaynayo ee bisha Maarso 15 taas oo Apple ay ku dhawaaqi doonto iPad Air 3 iyo iPhone 5se cusub iyo kuwo kale. Maaddaama ku dhowaad wax kasta oo la xiriira iPhone-ka cusub ee 4-inji ah durba la sii daayay, hadda way sii wadaan New iPhone 7 Fikradaha Lagu dhawaaqayo. Sida laga soo xigtay xanta cusub, iPhone 7 kamaradda IPhone-kan cusub ma lahan wax soo saar ah si ay uga dhigto mid ka duwan inta kale.
Jimcihii la soo dhaafay, wargayska The Guardian wuxuu ka sheekeeyay dhacdadii weriye hore u soo maray qufulan iPhone khalad 53, qalad muuqda marka qalabka lagu hagaajiyo adeegga Apple ee aan rasmiga ahayn ilaa iyo inta iPhone uusan haysan nooca ugu dambeeya ee iOS 9 lagu rakibay. Sida muuqata nidaamka qalliinka wuxuu ogaadaa inuusan aheyn qeyb asal ah wuxuuna xiraa si looga hortago in hadii terminaalka la xado, xogta ku jirta waa la heli karaa.Haddii aan ka hadalno codsiyada, waa inaan ka hadalno macmiil iimayl cusub oo yimid App Store, AirMail taasoo horeyba looga heli jiray Mac App Store. Lamaanaheena Luis Padilla ayaa daabacay dib u eegis dhameystiran oo ku saabsan taas oo uu ku tusayo waxyaalaha wanaagsan iyo kuwa xun ee maareeyaha emailkan. Laakiin toddobaadkan waxaan sidoo kale ku tusnay dalabka usbuuca, mid kale oo ah miirayaasha kamaradda iyo suurtagalnimada soo dejiso Final Fantasy II gebi ahaanba bilaash.
Marka laga hadlayo Jailbrea, wararka kaliya ee aan hayno ayaa ah Pangu waxay kugula talineysaa inaan u cusbooneysiino qalabkeena iOS 9.2.1 wax intaa dhaafsiisan. Xilligan la joogo kaliya Talyaani Todesco waxay muujisay in JAILBILN aan la ilaalin ee iOS 9.3 waa mid horumarsan laakiin sida uu sheegay dhowr jeer, ma laha wax qorshe ah oo uu ugu sii daayo bulshada guud.
Mac Otakara: "Waxaa jiri doona iPhone 5se oo casaan qafiif ah"